Layma's World: ညစ် ရင် … လေ ရင် … ဓါတ်ကျရင် …
Posted by Layma at 11:00 PM
မိုက်တယ်ကွာ.. မမလေးလေးမရဲ့စာတွေ.. အရေးအသားတွေ ပိုပိုပြီး ကောင်းလာပြီ..
ဒါနဲ့စကားမစပ်.. ကျွန်တော်သာ မမလေးရဲ့ အိမ်က မောင်လေး အစစ်ဖြစ်ရင်.. နေတိုင်း မမလေးကို စိတ်ညစ်အောင်လုပ်မယ်။ ဒါမှ တအိမ်လုံး အမြဲရှင်းလင်းနေမှာ.. :P
အ၀တ်တွေလည်း လျှော်စရာမလိုတော့ ဘူး.. ဟားဟား.. ပိုင်သကွာ...
သန့်ဇော်မင်းပြောသလို လေးမစိတ်ညစ်တဲ့အခါ တို့အိမ်ကို အလည်ဖိတ်ချင်တယ် အဟီးး နောက်တာပါ ။
တို့ကတော့ စိတ်ညစ်ရင် အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်.. အချိန်ကြာကြာ mp3 နဲ့ လမ်းဆုံးမရှိတဲ့ လမ်းတွေပေါ် ပြေးလေ့ရှိတယ်.. အခန်းထဲအောင်းပြီး စာအုပ် (သို့) ဘလောဂ့် (သို့) ဖတ်စရာတခုခု ဖတ်လေ့ရှိတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ pub ထိုင်တယ်.. ၀ိုင်နီကိုစွဲ၂မက်၂ သောက်တယ် .. ညတွေမှာ မအိပ်ဘဲ အမှောင်ထုကြီးကို ထိုင်ငှေးပြီး တယောက်တည်း မျက်ရည်ကျတတ်တယ် ။
လေးမ အ၀တ်တွေ တပုံကြီးလျှော်ရင်း ငိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့ အ၀တ်ပုံကြီးလျှော်ရလို့နဲ့ တူတယ်။ :P
ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရတဲ့ လောကကြီးမှာ လူဖြစ်လာကြတော့ လဲဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ။ စိတ်ညစ် ရင် အ၀တ်တွေလဲ
လျှော် ဘလော့မှာလဲရေးပါ။ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
ဟားဟား မမလေး အပြောတွေကြောင့် သိုးလေးလည်း ဘလော့ကြီးမှာ တော်တော်ပျော်မွေ့နေတာ။
စိတ်ညစ်ရင် ကဗျာရေး.... စာရေး.... အတွေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ရတယ်.....။ အရေးတွေ ကောင်းစရာမလိုဘူး.... အတွေးတွေလှစရာမလိုဘူး..... အေးအေးဆေးဆေး ဒိုင်ယာရီရေးသလို ရေးချင်တာတွေသာရေး.... ဘာမှတွေးမနေနဲ့ .... စိတ်ရှိသလိုသာရေး..... မကျေနပ်လို့အော်သွားတဲ့သူရှိရင်လဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်.......။ မငြိမ်ချင်ရင် ပြန်အော်လိုက်....။
“စိတ်ညစ်ရင် လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ရတာ အကောင်းဆုံးပဲ.”
ဒီလို အချိန်ကြီးမှ လမ်းလျှောက်ဖို့ အကြံပေးရလားဗျ ။
“ခက်တာက ကာတွန်းတိုင်းသည် ဟာသမဟုတ်.....ရယ်စရာမကောင်း.”
ဒါတော့ ဟုတ်တယ်။ ရီရခက်တဲ့ ကာတွန်းတွေ ရှိတယ် ။ ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းတွေလိုပေါ့။ ဖတ်ပြီး သက်ပြင်းချရတာများလို့ ။
blog ကြော်ငြာက ၀င်လိုက်သေးတယ် ။
“သီချင်းဆိုတာ အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲ.... ၀င်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..... ထွက်ပေါက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်..”
ဒီအတွေး သိပ်မိုက်တယ် ။ ဟုတ်တယ် ။ သီချင်းနဲ့ တချို့ စိတ်ဖြေရာတွေကို ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ ပဲ တွေးမိဖူးတယ်။ ထွက်ပေါက်ရှိရင် ၀င်ပေါက်လည်း ရှိတယ် ဆိုတာ မတွေးမိဘူး။
ကောင်းပဗျာ ။ တွေးလို့ ။
“စိတ်နဲ့ရင်ဘတ်ကို အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားလိုက်ပါ..”
ဟုတ်ကဲ့ ။ ဘာတွေဝင်လာပြီး ဘာတွေထွက်သွားလဲလို့ စောင့်မကြည့်တော့ဘူး ။ warm,wide,wild ...... လွှတ်ထားပေးလိုက်မယ်။
မိန်းကလေး တချို့က သိပ်ငိုချင်လာရင် ရေချိုးခန်းနဲ့ မကင်းဘူး ။ အဲဒါထူးဆန်းတယ် ။အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ တံခါးပိတ် ရေဘုံဘိုင်ကို ဖွင့်ပြီး အားရပါးရ ငိုတတ်ကြတာလည်းရှိတယ်။
ပေါ့သွားရောလား ။ အင်း ...... ကြိတ်ငိုစရာရှိရင်တော့ အိပ်ယာဝင်တတ်ကြတယ် ။
blog ကလည်း ထွက်ပေါက် တစ်ခု ၊ တံခါးတစ်ချပ်ပဲလား ။ ၀င်ပြီးရင် ပြန်မထွက်နိုင်မှာစိုးလို့ မလုပ်တော့ဘူး ။ သူများတွေကိုပဲ လိုက်ဖတ်နေတော့မယ် ။ :P
naing ….. အားပေးတယ်ဝေ့…..။
tzm , မဂျစ်တူး နဲ့sparrow ….သိနေတယ်လေ..သိနေတယ်…ဒီလို ဖွင့်ချလိုက်ရင် လေးမ ကို ဒီလိုပဲ စိတ်ညစ်အောင်လုပ်ပြီး ခိုင်းစားချင်ကြမယ်ဆိုသိပါတယ်… ဒီအခြေကိုမြင်လို့ လေးမတို့ က တကွက်ချန်ထားပြီးသား….။ ကဲ ချန်ထားတဲ့ အကွက်လေးကို အိမ်ဆောက်လိုက်မယ်…( အဲ …ယောင်လို့) ပြောပြလိုက်မယ်…ဟောဒီမှာကြည့်…
“ လေးမ စိတ်ညစ်ရင် တအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးမုန့် တွေကို ဘယ်သူ့ ကိုမှ မကျွေးဘဲ တစ်ယောက်ထဲ အကုန်စားပစ်တတ်တယ်… ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ…” ….။
ကိုဘုရင့်နောင် …. ဟုတ်ပါတယ်… အမှန်တော့ …လျှော်စရာတွေများလို့ငိုချင်နေတာ ….အားပေးမှုကိုကျေးဇူးတင်လျက် ( ဟီး…မင်းသမီးတွေလိုပြောကြည့်တာ ) ။
နှင်းနှင်း…..ဒွတ်လား…တိုးလေး.ကဒွတ်တယ်ဆို… ဒို့ ကလဲ ဒွတ်ပြီးသား…။
ဂျယ်ရီ…..အချွန်နဲ့ မပင့်နဲ့ နော်..တို့ များကရိုး၂ရေးတာ ….။ မိန်းကလေးတွေမှမဟုတ်ပါဘူး…. သားလဲ ငိုချင်ရင် ရေချိုးခန်းထဲမှာငိုလို့ ရပါတယ် ကွယ်….။ ၀င်ပြီး ပြန်မထွက်နိုင်မှာစိုးတယ်ဆိုတော့ ၀င်တုန်းက ပိန်၂လေး….ပြန်ထွက်တော့ ဘုတ်အိ ဖြစ်နေရင်တော့ အပေါက်ဘယ်ဆံ့ပါ့မလဲကွယ်….။